Ziziphi iiNkwenkwezi kwaye zihlala phi ixesha elide?
Xa sicinga ngeenkwenkwezi , sinokuzibona ngethuba lethu ilanga njengomzekelo omhle. Ingqungquthela ephezulu yegesi ebizwa ngokuba yi-plasma, kwaye isebenza ngendlela efanayo nezinye iinkwenkwezi ezizenzayo: nge-fusion yenyukliya kwinqanaba layo. Inyaniso elula kukuba iphela yenziwa ngeentlobo ezininzi zeenkwenkwezi . Basenokungakhange bahluke komnye nomnye xa sibheka emazulwini kwaye sibona nje ukukhanya. Nangona kunjalo, inkwenkwezi nganye kwi-galaxy idlula ubomi obenza ubomi bomntu bubukeke njengombala obumnyama ngokuthelekiswa. Ngamnye unendawo ekhethekileyo, indlela yokuziphendukela kwemvelo eyahlukileyo kuxhomekeke kubukhulu bayo kunye nezinye izinto. Nantsi i-primer esheshayo malunga neenkwenkwezi - indlela abazalelwa ngayo kwaye baphile kwaye kwenzekani xa bekhula.
Ihlelwe kwaye ihlaziywe nguCarolyn Collins Petersen.
Alpha Centauri (ngasekhohlo) kunye neenkwenkwezi ezijikelezayo. Olu lugqibeleleyo lwenkqubela yeenkwenkwezi, njengokuba ilanga liyilo. URonald Royer / Getty Izithombe
Nini inkwenkwezi ezalwe? Xa iqalisa ukwakha kwifu legesi kunye nothuli? Xa iqalisa ukukhanya? Impendulo ihlala kwingingqi yenkwenkwezi esiyiboniyo: ingundoqo.
Izazi zeenkwenkwezi zijonga ukuba inkwenkwezi iqala ubomi bayo njengenkwenkwezi xa i-fusion yenyukliya iqalisa kuyo. Kule nkalo, kungakhathaliseki ubunzima, kubonwa njengenkwenkwezi ehamba phambili. Le "yindlela yokuphila" apho ubuninzi benkwenkwezi buhlala khona. Ilanga lethu liye lalandelwa ngokulandelelana ngokumalunga neminyaka eyi-5 yezigidigidi, kwaye iya kuqhubeka enye iminyaka engama-bhiliyoni ama-5 ngaphambi kokuba iguqule ibe yinkwenkwezi enkulu ebomvu. Kaninzi "
Inkwenkwezi enkulu ebomvu yinyathelo elilodwa kwixesha elide lobomi beenkwenkwezi. Günay Mutlu / Getty Izithombe
Ulandelelwano oluphambili alugubungele ubomi benkwenkwezi. Ingxenye enye yendawo yokuhlala ye stellar. Emva kokuba inkwenkwezi isetyenzisile yonke i-hydrogen fuel yayo engundoqo, itshintsha ngokulandelelana ngokukhawuleza ibe yinto enkulu ebomvu . Ngokuxhomekeke kubukhulu beenkwenkwezi, kunokusasaza phakathi kwamazwe ahlukeneyo ngaphambi kokuba ekugqibeleni ube yinto emhlophe, inkwenkwezi ye-neutron okanye iwele kuyo ngokwayo ukuba ibe ngumda omnyama. Omnye wabamelwane bethu abasondeleyo (ukuthetha ngokwetyala), iBelelgeuse okwangoku isigaba sayo esibomvu , kwaye kulindeleke ukuba ihambe ngeyona nantoni na phakathi kwexesha elizayo nezigidi ezizayo. Ngexesha le-cosmic, oko kwenzeka "ngomso". Kaninzi "
Ezinye iinkwenkwezi zilahlekelwa ubunzima kumaqabane abo, njengoko lo wenzayo. Oku kukhawuleza inkqubo yokufa kweenkwenkwezi. NASA / JPL-Caltech
Xa iinkwenkwezi ezinzima njengeLanga zifikelela ekupheleni kobomi babo, zifaka isigaba esibomvu esikhulu. Kodwa uxinzelelo lwangaphandle lwe- radiation oluvela kumbindi ekugqibeleni lugxininisa uxinzelelo lwezinto eziphathekayo ezifuna ukuwela ngaphakathi. Oku kukuvumela inkwenkwezi ukuba ikhule ngakumbi kwaye ibe kude.
Ekugqibeleni, imvulophu yangaphandle yeenkwenkwezi iqala ukudibanisa kunye nendawo ehlala kuyo kunye neleyo eseleyo yintsali yenkwenkwezi. Le ngundoqo ibhola ephosiweyo yekhabhoni kunye nezinye izinto ezahlukahlukeneyo ezivuthayo xa ziphosa. Ngexesha eliqhelekileyo libhekiswa njengeenkwenkwezi, isilwanyana esimhlophe asiyiyo inkwenkwezi ngokwenene njengoko ingafaki i- fusion yenyukliya . Kunoko yintsalela ye- stellar, njengenqatha emnyama okanye inkwenkwezi ye-neutron . Ekugqibeleni yile hlobo lento eya kuba yinto ehlala yodwa kwiSiliyoni zeeyure zeminyaka ukususela ngoku. Kaninzi "
I-NASA / i-Goddard Space Flight Centre
Inkwenkwezi ye-neutron, njengombala omhlophe okanye umnyama omnyama, ngokwenene ayiyona inkwenkwezi kodwa intsalela ye-stellar. Xa inkwenkwezi enkulu ifinyelela ekupheleni kobomi bayo iqhutyelwa ukuqhuma kwe-supernova, ishiya emva kwayo ingqungquthela engundoqo. Isobho-esinokuzaliswa ngeenkwenkwezi zeenkwenkwezi ze-neutron ziza kubakho ubunzima obufanayo njengenyanga yethu. Kukho izinto eziyaziwayo ukuba zikhona kwi-Universe eneentlupheko ezingaphezu kweenkuni ezimnyama. Kaninzi "
Lo mngxobho omnyama, phakathi kwendima ye-M87, ulahla umjelo wezinto ezivela kuwo ngokwawo. Ezi zimbobo ezimnyama eziphezulu zixakeke ngokuphindaphindiweyo ubunzima beLanga. I-stellar mass mass hole ingaba yincinci kunene, kwaye ininzi kakhulu, ekubeni yenziwe kwinqanaba leenkwenkwezi enye kuphela. NASA
Izimbobo ezimnyama zibangelwa yiinkwenkwezi ezinkulu kakhulu eziziwayo ngenxa yazo ngenxa yobukhulu bemvelo abayidalayo. Xa inkwenkwezi ifinyelela ekupheleni komjikelezo wayo wokulandelelana wobomi, i-supernova elandelayo iqhuba inxalenye yangaphandle yenkwenkwezi ngaphandle, ishiya kuphela ingundoqo emva kwayo. Ingundoqo iya kuba yincinci kangangokuthi kungabikho ukukhanya okusemandleni okubaleka. Ezi zinto zinzima kangangokuba imithetho ye-physics iyawa. Kaninzi "
Amantombazana amaBrown aphelelwa yinkwenkwezi, oko - izinto ezingenayo ngokwaneleyo ubunzima ukuba zibe ziinkwenkwezi ezizeleyo. I-NASA / JPL-Caltech / iGemini Observatory / AURA / NSF
Amantombazana aBrown awanalo nkwenkwezi, kodwa kunokuba "ahluleke" iinkwenkwezi. Benza ngendlela efana neenkwenkwezi eziqhelekileyo, nangona bebengalokothi bazibuthele ngokwaneleyo ubunzima bokutshabalalisa i-fusion yenyukliya kwiimpawu zabo. Ngako-ke zibonakala zincinci kuneenkwenkwezi ezilandelelana. Enyanisweni abo bafunyenwe bafana kakhulu nomhlaba Jupiter ngobukhulu, nangona kuninzi kakhulu (kwaye ke kuninzi kakhulu).
Iinkwenkwezi eziguqukayo zikhona kuyo yonke imilambo, kwaye nakwiisigaba ze-globular ezifana nale. Ziyahlukahluka ekukhanyeni ngexesha eliqhelekileyo. I-NASA / i-Goddard Space Flight Centre
Zininzi iinkwenkwezi esizibonayo esibhakabhakeni sasebusuku zilondoloza ukukhanya okuqhubekayo (ukuphazima kwamanye amaxesha sikubona ngokusemthethweni kudalwe yimihlaba yethu), kodwa ezinye iinkwenkwezi ziyahlukahluka ngokukhanya kwazo. Iinkwenkwezi ezininzi zinomlinganiselo wokutshintsha kwazo (njengeenkwenkwezi ze-neutron ezijikelezayo, ezibizwa ngokuba yi-pulsars) ezininzi iinkwenkwezi eziguquguqukayo zitshintsha ukukhanya ngenxa yokunyuka kwazo kunye nokuqhekeka. Ixesha le-pulsation liyabonwa lilingana ngokukhawuleza nokukhanya kwayo kwangaphakathi. Ngesi sizathu, iinkwenkwezi eziguquguqukayo zisetyenziselwa ukulinganisa imimandla ukususela kwixesha labo kunye nokukhanya okubonakalayo (indlela ebonakalayo ebomini kuthi eMhlabeni) inokugwetyelwa ukubala ukuba kude kangakanani nabo.
Ubomi kulandelelwano oluphambili: Indlela zeenkwenkwezi eziguquka ngayo
Siphila kwi Sixeko? Unokwenza u-Stargaze
Sirius: Inkwenkwezi yeNja
Njani I-Big Can Star?
Ziziphi Iindlovu Zokuqala?
Iimfihlelo ze-Jupiter enkulu ye-Red Spot
Hlola umhlaba - iPlanethi yethu yaseKhaya
Ziyintoni Phakathi KwamaGalaxi?
Izisombululo ezintle kwiindlela ezi-5 eziqhelekileyo zokufunda
I-Telamonia Spider ebiniweyo
I-Barack Obama Worksheets kunye namaphepha ombala
I-Down Down kwiVolleyball
Iingcaphuno Ezivela "Kwabathathu Abakhulu"
'Woza Nonke Nithembekileyo' ngeSpanish
Ukufunda malunga namaVandi aseJapan
I-Super Funny Music Parody IiVideos ngeSitshixo seNkqantosi
Intlawulo yeNtengiso - I-Economics of Sales Tax
Abanini bezikhundla zokuBhala
Imfazwe yaseKorea: Grumman F9F Panther
Iimpawu zeSpeyin ezibhekisela kwiZiko lokutya
Panj Pyare - Abathandekayo Abahlanu
Porter, S'habiller, Se Mettre En ... esithi "Ukugqoka" ngesiFrentshi
Ukuthelekiswa kwe-ACT Yenza izikolo zeYunivesithi yaseCalifornia
Umthandazo Olula Olusisindisayo Kubantu Abaselula
Ndilahlekelwe ngumnqweno wam kwiPaint. Naziphi na izimvo?